FAQs - Shenzhen Radiant Teknolojia Co., Ltd.
Fampisehoana LED azo haody
Fampitaovana Fine Pitch LED
LCD vs Direct View LED Video Walls: Inona no Ilainao mba Fantatrao
Raha toa ianao tany an-tsena ny fijerena rafitra, ianao angamba efa hita fa rindrina mampiseho lahatsary avy amin'ny saro-bahana endriny isan-karazany, ny habeny, ary ny teknolojia. Mety ho nahatsikaritra ihany koa fa maro ny mpanamboatra mampiasa anarana samy hafa, fa iray ihany ny teknolojia sy manao filazana mifanohitra momba izay manao ny tsara indrindra ny teknolojia.
Tsy mahagaga raha izany dia afaka mamorona ny fifanjevoana be dia be ho an'ny mpividy. Ho an'ny olona maro, hevitra manokana iray ny fikorontanana no maha samy hafa karazana roa malaza Display: "LCD" (indraindray dia antsoina hoe "LED-LCD") sy "LED" (indraindray dia antsoina hoe "Direct View nitondra"). Na dia mety ho toa toy izany koa, LCD sy Direct View LED roa miavaka tsara amin'ny teknolojia fampisehoana ny endri-javatra sy ny tombontsoa tsy manam-paharoa. Noho izany, inona no soa ireo? Ahoana no maha samy hafa? Raha miady mafy ianao mba hamaliana ireo fanontaniana ireo, eto izahay mba hanampy!
Inona no atao hoe LCD?
LCD (ranon-javatra kristaly Asehoy) dia maneho karazana fisaka tontonana izay efa nalaza nandritra ny taona maro ao amin'ny rindrina na ny lahatsary sy ny mpanjifa elektronika tsena. Mety ho efa mampiasa ny teknolojia LCD imbetsaka isan'andro - izany no karazana fampisehoana ampiasaina amin'ny finday avo lenta indrindra, solosaina mpanaramaso, sy ny fahitalavitra.
LCD kobany dia ahitana ny sosona ny rano krystaly teo anelanelanay sekely roa Mizarazara fitaratra. Rano kristaly dia harena izay mikoriana toy ny ranon-javatra, fa manana izay molekiola azo miompana toy ny kristaly. Rehefa misy herinaratra amin'izao fotoana izao dia ampiharina amin'ny rano kristaly, ny kristaly manilika, mamela hazavana mba handeha hamorona sary. Ranon-javatra kristaly Tsy mamokatra ny hazavana, ka dia nanao fandaharana backlights ambadiky ny fitaratra mba hanazava ny fampisehoana. LED (hazavana-emitting diodes) no tena fahita karazana backlight ampiasaina amin'izao fotoana izao, ary ny sasany mpanamboatra hivarotra ny LED-backlit LCDs toy ny "LED-LCD."
Tombony ny LCD
LCDs dia mamirapiratra, takatry, azo ianteherana, ary manome tsara tsary fampisehoana. LCD dia tena vahaolana avo-teknolojia, ka LCD Video rindrina dia afaka maneho lahatsoratra, sary, ary lahatsary amin'ny maranitra antsipirihany. Ireo tombony lehibe ho LCDs safidy ho isan-karazany ny lahatsary rindrina fampiharana, amin'ny fanaraha-maso ara-tafika efitra ny oniversite foibem-pikarohana.
Fatiantoka ny LCD
Rehefa LCDs dia tiled miaraka mba hamoronana lahatsary manda, bezels (na seams) dia hita eo amin'ny olona tontonana. Mety ho hita ho toy ny tombon-dahiny, rehefa nampitaha ny miray volo LCD karazana fampisehoana toy ny Direct View LED. Na izany aza, dia mampihena mpanamboatra bezel-sakany amin'ny taranaka vaovao tsirairay ny mampiseho, dia ho hitanao fa ny bezels tamin'ny vaovao dia be LCDs zara.
Inona no LED?
Toy ny LCD, Direct View nitondra (indraindray fotsiny antsoina hoe "LED") dia fisaka-tontonana maneho karazana momba ny fampiasana ny hazavana-emitting diodes (LED). Na izany aza, Direct View nitondra miasa tena hafa avy LCD. Ao mivantana View LED fanehoana, LED kely an-jatony no nitaingina mivantana eo amin'ny tontonana, ary tsy misy rano krystaly na Mizarazara fitaratra no ampiasaina. Raha tokony hanompo toy ny backlight (toy ny ataony amin'ny LCD mampiseho), ny LED in Direct View LED mamokatra sary mampiseho ny tenany. LED tsirairay dia kely indrindra fahazavana jiro izay Mamoaka hazavana miloko malefaka, rehefa manokana dia ampiharina aminy. Sampahony ny mena, maitso, sy manga LED no mivondrona ao amin'ny tontonana, famoronana manontolo teboka loko ilaina hamokatra sary.
Direct View LED taloha-ny ambany karazana vahaolana Asehoy ampiasaina indrindra fa tany ivelan'ny trano fampisehoana goavana, fa ny fampandrosoana ny LED kely tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nanao fanapahan-kevitra azo atao ambony be. Ireo fandrosoana vao haingana no nanao Direct View LED iray mampientam-po safidy vaovao ho an'ny an-trano Video rindrina.
Tombony ny LED
Direct View LED kobany tsy misy bezels, mba hahafahany ho tiled miaraka mba hanangana tanteraka miray volo lahatsary manda . LED ihany koa ny fampisehoana tena mamirapiratra, azo antoka,-angovo mahomby, ary manana ny tsara indrindra loko marina sy hamelombelona tahan'ny misy fampisehoana karazana misy ankehitriny. Ireo toetra ho Direct View LED tena tsara ho an'ny safidy goavana signage nomerika sy ny fampiharana hafa izay mitaky avo-fiantraikany sary.
Fatiantoka ny LED
Na vidin-javatra dia antenaina mba hampihenana nandritra ny taona maro ho avy, ambony-fanapahan-kevitra amin'izao fotoana izao LED mandanao dia imbetsaka lafo kokoa noho ny LCDs, ka izany teknôlôjia izany dia mbola any amin'ny toerana lavitra ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa. Ankoatra izany, na dia ny ambony indrindra-fanapahan-kevitra mampiseho ny LED mbola tsy afaka manome ny hiringiriny-avo amin'ny LCD misy fanapahan-kevitra. Mba hampiasaina-tranga izay mitaky ny saina ho amin'ny tsara indrindra tsipiriany, LCD mampiseho mety mbola afaka nisafidy izy.
Manantena izahay no efa nandatsaka nanampy fanazavana sasany momba ny fahasamihafana - ary mahazatra soa - ny LCD sy Direct View LED Video rindrina. Amin'ny farany, na fanehoana tsara indrindra ny teknolojia, ary afa-tsy ny fampiharana manokana sy ny teti-bola dia afaka mamaritra ny safidy tsara indrindra ho anao.
Rihana 3, Trano D, Yisong Ecological Technology Park, No.9 Jiejiabao Road, Baoan Distict, Tanànan'i Shenzhen, Sina